Tranga pesta Pôronicon iray no nohamafisina tao Seychelles: Manakana ny fidiran'ny dia avy any Madagasikara ny manampahefana
Home » Travel Associations News » Tranga pesta Pôronicon iray no nohamafisina tao Seychelles: Manakana ny fidiran'ny dia avy any Madagasikara ny manampahefana
Nanambara ny minisiteran'ny fizahantany, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary ny marinano miaraka amin'ny Birao fizahan-tany Seychelles fa nisy ny fanapaha-kevitra noraisina mba hamerana ny fidiran'ny mpandeha avy eto Madagasikara.
Ny didim-pitsarana dia nangatahan'ny Lehiben'ny Fahasalamam-bahoaka ary fepetra raisina ho fisorohana izany noho ny fitomboan'ny risika hampidirana ny pesta amin'ny pnemonia ao Seychelles, izay manimba an'i Madagasikara ankehitriny.
Nanamafy ny minisiteran'ny fahasalamana any Seychelles fa nahita ny tranga voalohany nahitana trangana pnemonia tamin'ny talata ny firenena. Ny marary dia lehilahy Seychellois izay niverina avy tany Madagasikara tamin'ny sidina Air Seychelles ny zoma 6 oktobra lasa teo. Ny fitiliana haingana dia vita taorian'ny nanombohan'ny soritr'aretina lehilahy, anisan'izany ny tazo ny alatsinainy, ary nanjary tsara ny fitsapana. Ny fitsapana fanamafisana ofisialy izao dia atao amin'ny santionan'ny rà alefa any amin'ny laboratoara fanondro any ampitan-dranomasina, indrindra fa ny Pasteur Institute any Frantsa.
Mailo hatrany ny tompon'andraikitra Seychelles hatramin'ny nanamafisana fa mpanazatra baskety iray any Seychellois, maty tany amin'ny hopitaly iray tany Madagascar tamin'ny volana lasa teo, taorian'ny voan'ny aretina.
Na ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny birao fizahan-tany any Seychelles dia samy manantena ny zotram-piaramanidina rehetra manidina mankany Seychelles hiara-hiasa sy tsy hiakatra amin'izay mpandeha tonga any Seychelles avy eto Madagasikara mandritra izao fotoana izao. Izay mpitsangatsangana mamaky ny rafitra na mandeha mamaky an'i Seychelles avy any Madagascar dia omena safidy hiverina avy hatrany, raha tsy izany dia tsy maintsy hiditra amin'ny foibe mitokana mandritra ny enina andro.
Ny ivon-toerana mitokana hita ao amin'ny Akademia miaramila Seychelles Coast Guard dia efa natokana ho an'ireo mpandeha (mpitsidika sy mponina) rehetra tonga ao Seychelles avy any Madagasikara amin'ny alàlan'ny zotra hafa, satria ny fiaramanidina nasionaly, Air Seychelles dia efa nanafoana ny sidina mivantana mankany Madagascar ny faran'ny herinandro, araka ny fangatahan'ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Na ny minisiteran'ny fizahantany na ny STB dia samy nanamafy fa ny mpizahatany rehetra manao vakansy any Seychelles dia afaka mankafy ny fialan-tsasatr'izy ireo ary ny fameperana hiditra ao amin'ny firenena dia mikendry ireo mpandeha miditra Seychelles avy eto Madagascar ihany.
Ny manampahefana misahana ny fahasalamana ao Seychelles koa dia miara-miasa amin'ireo mpandraharaha mpizahatany mba hanakiviana ny mponina Seychelles tsy handeha ho any Madagascar. Ireo olona izay tonga tany amin'ny nosy ranomasimbe Indianina tao anatin'ny 7 andro lasa dia efa nojerena ary arahin'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana amin'ny fomba voarindra.
Zava-dehibe ny manamarika fa hatreto dia tranga iray monja amin'ny peste pneumonia no voamarina ao Seychelles. Ilay olona nametraka fanontaniana dia nekena nitokana tao amin'ny hopitaly Seychelles ary omena antibiotika, prophylaxis marimarina kokoa, ary mamaly tsara ny fitsaboana hoy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana. Ny minisiteran'ny fahasalamana dia nilaza fa ny fianakaviany akaiky, ao anatin'izany ny olon-tiany, zaza miara-mipetraka amin'izy ireo ary koa namana akaiky iray, dia niditra an-tsokosoko ihany koa taorian'ny nanombohan'izy ireo nanavy, ho fepetra fitandremana. Izy ireo koa dia entina amin'ny fitsaboana, satria izy io no protokol mamaritra ny fitsaboana ireo olona efa tratran'ny tsipika voalohany tamina olona iray fantatra.
Ny minisiteran'ny fahasalamana dia manenjika ireo olona izay mety nifandray tamin'ilay olona voan'io aretina io, taorian'ny nahafantarana fa tsy nankato ny toromarika izy mba hiambenana hatrany ao an-tranony taorian'ny niverenany avy tany Madagascar ary nanatrika fivoriana iray. Namaly ny fanontaniana maika tao amin'ny antenimieram-pirenena androany maraina ny minisitry ny fahasalamana Jean Paul Adam nanamafy fa ireo olona ireo, indrindra ireo mpampianatra, izay tao amin'io fiasana io dia nijanona tao amin'ny fialantsasatra marary nandritra ny 6 andro ary notsaboina tamin'ny fitsaboana madio tokoa ho fepetra fitandremana.
Hatreto dia voamarina fa sekoly roa farafaharatsiny no nanapa-kevitra ny hanidy. Nilaza ny minisitra Adam tao amin'ilay fivoriambe fa mbola tsy nisy fangatahana avy amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana hanidy ireo sekoly, saingy mety nandray ny fanapahan-kevitra izy ireo satria maro amin'ireo mpiasan'izy ireo no manaraka fitsaboana amin'ny fialantsasatra marary, satria izy ireo dia niasa tamin'ny ilay olona voa.
Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), ny fambara sy soritr'aretin'ny pesta dia mety ahitana tazo tampoka, mangatsiaka, lalan-drà mamaivay ary mamaivay, na sempotra miaraka amin'ny kohaka izay misy ny rora na ny moka maloto ra. Ny aretina pesta dia azo sitranina amin'ny fampiasana antibiotika mahazatra raha sendra aloha ary ny antibiotika koa dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny aretina amin'ireo olona tratry ny aretina.
Fankalazana sy selfie be dia be amin'ny tsingerintaona IMEX manokana
Ny fizahan-tany any Jamaika dia mametraka indray an'i Falmouth ho toerana maharitra